Ụgbọ elu mba ofesi India: nkwụsị ogologo oge na -emebi ihe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Ụgbọ elu mba ofesi India: nkwụsị ogologo oge na -emebi ihe
Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Ụgbọ elu mba ofesi India
Onye isi oche ndị otu ndị njem nlegharị anya nke India (IATO), Maazị Rajiv Mehra, kwupụtara oke ndakpọ olileanya ya na mkpebi nke Ministry of Aviation/DGCA nke India mere ịgbatị nkwụsị ụgbọ elu mba ụwa ruo na Septemba 30, 2021, na nke Visa e-Tourist.
Onye isi ala IATO rịọrọ na oge eruola ka gọọmentị tinye aka ma nyere ụlọ ọrụ njem na ndị njem aka.
Maazị Mehra anọwo na-akwalite mmeghe visa e-Tourist ruo oge ụfọdụ ugbu a.
Na mgbakwunye, mkpakọrịta ya na -akwado ịmalitegharị ụgbọ elu mba ofesi ma kọwaa otu esi eme ya.
O kwuru na ndị otu IATO nwere oke nkụda mmụọ na nkụda mmụọ maka mkpebi a gọọmentị wepụtara. Maazị Mehra kwuru, "Oge eruola ka gọọmentị nyere ụlọ ọrụ njem nlegharị anya aka site na ịtụte njem nlegharị anya na India," na -akọwapụta arịrịọ ndị a na -arịọ gọọmentị.
Maazị Rajiv Mehra, Onye isi ala, IATO
- Imepe oghere e-Nleta Visa maka ndị njem nlegharị anya mba ofesi niile gbara ọgwụ mgbochi ma chọọ ịbịa India. Kwe ka ndị njem si mba ọzọ kpebie ma ha chọrọ ịga India ma ọ bụ na ha achọghị. Anyị ekwesịghị igbochi ha ịga India, mgbe mba ndị ọzọ mepere ụzọ maka ndị njem.
- N'otu aka ahụ, ekwesịrị ịmaliteghachi ọrụ ụgbọ elu mba ụwa nkịtị, ma hapụ ndị ụgbọ elu ka ha kpebie ma ha chọrọ ịrụ ọrụ ma ọ bụ na ọ bụrụ na enwere ihe mgbochi. Mana gọọmentị kwesịrị ikwe ka ịmaliteghachi ụgbọ elu.
Akụkụ ndị ọzọ eweghachila azụmaahịa ha site na nkwado nke gọọmentị India, ọ bụkwa naanị ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya na -agbasi mbọ ike maka nlanarị n'ime ọnwa iri na asatọ gara aga na -enweghị enyemaka ọ bụla. Onye isi ala IATO rịọrọ na gọọmentị kwesịrị ịkwado ụlọ ọrụ njem nlegharị anya ọkachasị ndị na -eme njem nlegharị anya na -abaghị uru kemgbe March 18.
Ụbọchị ole na ole gara aga, Maazị Mehra, sonyere na a nzukọ nke Minista Azụmaahịa na Mmepụta akpọrọ, Shri Piyush Goyal, iji nweta ntinye n'aka ndị na -ebubata ya ihe achọrọ ka aga -eme na oku Prime Minister ịbawanye mbupụ.
Na nzukọ ahụ, Maazị Mehra tụrụ aro otu usoro nke ikwe ka visa eleta anya na ịmaliteghachi ọrụ ụgbọ elu mba ụwa nkịtị. O mekwara ka Minista ahụ mata banyere ọnọdụ ego dị njọ nke ndị na-eme njem nlegharị anya mere n'oge ọrịa na etu mwepụta SEIS (Mbupu Ọrụ si India Atụmatụ) maka afọ ego 2019-20 dị mkpa maka nlanarị ha.